Ahoana ny fomba hahafaly amin'ny maha mpitovo ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana no mba ho faly ny Single. Mampianatra antsika ny Baiboly ankafizo ny dingana tsirairay amin'ny fiainantsika nefa tsy variana amin'ny tanjona iray manokana. Nanambady i Pedro ary mpitovo i Paulo, saingy samy nanana fiainana feno fientanam-po izy ireo ary nandray anjara betsaka tamin'ny fitomboan'ny fiangonana. Na dia tsy manana vady aza ianao, dia afaka manana fiainana tsara sy mahafa-po.
Raha mipetraka irery ianao, ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia izany tsy hamaha ny olanao rehetra ny fanambadiana. Ny toe-javatra rehetra dia misy ny fiakarany sy ny fidinany. Tsy angano ny fanambadiana fa misy ny fahasahiranany. Ary ny fiainana irery dia tsy mitovy amin'ny fanirery na alahelo. Asehon’ny Baiboly ny fomba ahafahanao miaina amim-pifaliana ho mpitovo:
Fa na dia hanam-bady aza ianareo, dia tsy manota; ary raha manambady ny zazavavy, dia tsy manota izy; fa ny toy izany dia hanana fahorian'ny nofo, ary tiako ny hisoroka izany ho anareo.
1 Korintiana 7:28
1 Ahoana no mahasambatra ny Mpitovo araka ny Baiboly
1.1 1. Velona ho an’Andriamanitra
1.2 2. Sarobidy ny fisakaizanao
1.3 3. Ampio ny hafa
Ahoana no mahasambatra ny Mpitovo araka ny Baiboly
Ahoana no mba ho sambatra araka ny Baiboly tsikelikely
1. Velona ho an’Andriamanitra
Olona iray ihany no afaka mameno anao: Jesosy. Tsy misy olona mamakivaky ny lalanao afaka mameno ny banga ao am-ponao. Jesosy irery ihany no afaka manao izany. Mankanesa any amin’i Jesosy ary atolory Azy ny ainao. Hahita dikany sy zava-kendrena amin’ny fiainanao ianao amin’izay. Tsy ho irery mihitsy ianao, satria homba anao mandrakariva Jesosy.
Raha mbola irery ianao afaka manokana fotoana bebe kokoa amin’ny zavatr’Andriamanitra ianao. Noho izany, ankafizo ny fahafahana tsy voatery hikarakara fianakaviana mba hianatra bebe kokoa momba ny Tenin’Andriamanitra sy hirotsaka bebe kokoa any am-piangonana.
“Enga anie ka tsy hisy alahelo ianareo. Ny mpitovo dia mikarakara izay an’ny Tompo, dia ny amin’izay hahafaly ny Tompo; ».
1 Korintiana 7:32
Fantaro ny fifaliana avy amin’ny fiderana an’Andriamanitra. Makà fotoana handinihana ny fiainanao ary hampifanaraka ny toe-tsainao sy ny eritreritrao amin’ny sitrapon’Andriamanitra.
Fitahiana lehibe ny fakana fotoana hanamafisana ny fifandraisanao amin’Andriamanitra. Aza adino ny fahafahana manatona an’Andriamanitra. Amin'izany fomba izany, ny maha-tovo anao dia afaka manampy anao amin'ny fiainanao.
2. Sarobidy ny fisakaizanao
Ny hoe miaina irery dia tsy midika hoe mitokana amin’ny tontolo hafa. Mamirapiratra ny fiainana ny fisakaizana ary mitondra fomba fijery sy fahafahana vaovao. Isika rehetra dia mila namana sy firaiketam-po, koa mivoaha ny trano ary mandany fotoana miaraka amin'ny namana.
Tsara ny roa noho ny iray; satria manana karama tsara kokoa amin'ny asany izy ireo. Fa raha lavo izy, dia ny anankiray hanangana ny namany; fa ny solo ô! fa rehefa lavo izy dia tsy hisy faharoa hanainga azy.
Mpitoriteny 4: 9-10
Raha mankany am-piangonana ianao dia ho afaka ny hanana namana kristiana izay ho a fiantraikany tsara eo amin’ny fiainanao. Ny fiangonana koa dia toerana tsara hanaovana izany mihaona amin'olona tsy mitovy aminao, miaraka amin'ny traikefa isan-karazany ary afaka mampianatra anao zavatra maro izany. Afaka manao izany ianao mitombo sy mankahery amin’ireo rahalahinao kristiana.
“Aza mitsahatra miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa amin’ny fananarana; mainka fa raha hitanareo fa antomotra izany andro izany ».
3. Ampio ny hafa
Nilaza izany i Jesosy misy fahasambarana lehibe kokoa ny manome noho ny mandray. Noho izany, ny fomba iray hafa hanararaotra ny fotoana maha mpitovo anao dia ny fanokanana izany mba hanampiana ny hafa. Azonao atao ny mitahy ny mpiara-monina, ny namana, ny havana, ny mpiara-miasa na ny fikambanana sasany. Ny safidy tsara indrindra dia fielezan'ny Fitiavan’Andriamanitra para ser más feliz.
Tamin’ny zavatra rehetra no nampianariko anareo fa, amin’ny fiasana toy izany, dia tsy maintsy manampy izay sahirana ianareo, ary mahatsiaro ny tenin’i Jesosy Tompo, izay nanao hoe: Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.
Asan'ny Apôstôly 20:35
Ny fahavalon'ny fahasambarana lehibe dia ny fitiavan-tena. Ampio ny hafa mampitombo ny fahasambarana ary manampy anao hiaina amim-pahatapahan-kevitra, tsy mijery afa-tsy ny toe-javatra misy anao. Ny fitiavana kristiana dia azo zaraina amin’ny rehetra, fa tsy ny fianakaviana ihany.
Ny fiainana irery dia tsy voatery ho traikefa ratsy na mitoka-monina. Azonao ampiasaina io fotoana io manatona an’Andriamanitra sy ny olona manodidina anao.
Manantena izahay fa hanampy anao hahafantatra ity lahatsoratra ity ahoana no hahasambatra ny maha mpitovo. Manome toky izahay fa, raha mampihatra ireo toro-hevitra telo ireo ianao, dia hiaina toetry ny fahasambarana hafa noho ny mahazatra anao. Raha te hianatra lohahevitra ara-baiboly bebe kokoa ianao izao, dia manoro hevitra anao izahay mba hianatra nanao ahoana ny sambo-fiaran’i Noa.